China Export 2020 voankazo paoma vaovao misy voany vaovao miaraka amina mpamokatra sy mpamatsy vidiny tsara | AGR
Momba ny AGR
Vidiny sinoa tsara indrindra manondrana vaovao vokatra vaovao volomparasy mena ...
manondrana legioma sy tongolo gasy vaovao ambongadiny ...
Vidiny lafo Sinoa ambongadiny vaovao ginger vaovao
Sina Wholesale avo lenta vidin'ny fifaninanana Red f ...
Manondraha voankazo paoma vaoavao vaovao 2020 amin'ny vidiny lafo
1.Apple dia voankazo mamy sy azo hanina amin'ny hazo Malus domestic. Voankazo boribory izy io izay mety ho tonga amin'ny habe sy loko isan-karazany
toy ny mavo, maitso na mena. Ny paoma dia matetika mamy ary ny cam dia hohanina vaovao na ampiasaina amin'ny sakafo, saosy, famafazana, ranom-boankazo na
ilay paoma poma malaza. Ny voan'ny paoma dia azo torotoro koa hanalana ny menaka, izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny tarehy. Ny voankazo dia misy gliosida, siramamy ary fibre amin'ny ankamaroan'ny proteinina sy tavy tsy azo tsinontsinoavina.
Ny paoma 2.Fuji dia miavaka amin'ny habeny lehibe, mena manerana azy, endrika boribory ary habe antonony toy ny baseball. 9-11% ny lanjan'ilay voankazo dia monosaccharides, ary ny nofony dia mifono, mamy sy crisper kokoa noho ny karazana paoma maro hafa, noho izany dia tian'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao izy.
Raha ampitahaina amin'ny paoma hafa, ny paoma Fuji dia manana tsara lavitra kokoa alohan'ny daty ary tsy mila tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana akory. Azo tehirizina elaela amin'ny mari-pana amin'ny efitrano. Raha alona anaty rano 5% ny paoma mandritra ny 10 minitra, maina, atsofohy ao anaty kitapo mitazona vaovao, voaisy tombo-kase ary atao anaty vata fampangatsiahana, voafehy amin'ny 0-40 ℃ ny mari-pana, ary azo tehirizina mandritra ny 5 volana .
Ny voankazo paoma matsiro sy mangatsiaka dia iray amin'ny voankazo malaza indrindra sy ankafizin'ny mpitia ara-pahasalamana sy ny fahasalamana izay mino tanteraka ny foto-kevitra hoe "ny fahasalamana dia harena." Ity voankazo mahafinaritra ity dia feno fonto-otrikaina manankarena izay, amin'ny tena heviny, tena ilaina amin'ny fahasalamana tsara indrindra.
Ny voankazo paoma matsiro sy mangatsiaka dia iray amin'ny voankazo malaza indrindra sy ankafizin'ny mpitia ara-pahasalamana sy ny fahasalamana izay mino tanteraka ny foto-kevitra hoe "ny fahasalamana dia harena." Ity voankazo mahafinaritra ity dia feno fonto-otrikaina manankarena izay, amin'ny tena heviny, tena ilaina amin'ny fahasalamana tsara indrindra. Ny antioxidants sasany ao amin'ny paoma dia manana fampiroboroboana ny fahasalamana sy fisorohana aretina, ary amin'izany, tena manamarina ilay fitenenana hoe, "paoma iray andro dia manalavitra ny dokotera."
Manaraka: China Wholesale avo lenta vidin'ny fifaninanana Apple vaovao
China Wholesale avo lenta vidin'ny fifaninanana ...
Tsy misy E 1703-2 Fandraharahana sy fanilo Square-tech Zona City Zibo City Shandong Province Pr China
VARIETY LEHILAHAM-BOLA Vokatra GARLIC, AS ...
Tongolo voanjo vanim-potoana mivoaka!
Vokatra rehetra io, midina hatrany ambany